Yakapwanyika - a friable particulate inorganic zvinobva zvikamu kupfuura 5 mm. It chinoitwa takaparadzana nematombo, boulders uye mavhu, apo akapoteredza matombo mined kana anoramba Somuenzaniso, migodhi mapoka chicherwa kugadzira.
Zvinonzi pamwe chete na kwakabva - dzinongoitika uye sokurwarirwa. Naizvozvo, ikabereka akasiyana matombo, rakakamurwa girenayiti, reraimu uye mavhu. Kana yakakamurwa makirasi yakapwanyika ibwe, iye anopiwa yakananga achinyora dzimwe unhu kupfuura kuita zvimwewo kupatsanura. Somuenzaniso, muchimiro marara mabwe izvozvo rinopembererwa sezvo kuboobrazny uye, akashevedza saizvozvo, flakiness. Kuboobrazny marara ane mukuru mukurumari kuti abrasion nezvainoita, uye flakiness - kunovimbisa kubatana kwazvo sezvinoita filler. Asi arambe achirema uye simba runopfuura girenayiti shanduro. Rinoshandiswa sechinhu uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. nokuda kongiri, mitoro njanji, uye mumwe pakusika mikuru uye zvichingodaro. P. Zvichienderana chinangwa kushandiswa ichi zvokunyama vane zvinoda siyana pamusoro ehupfumi akadai zvakaoma, vhoriyamu, fractional akafanana uye kuvapo nouipi. Granite chips yaunganidzwa nzira unorema rwokuzvarwa girenayiti. Rinooneka chimwe chezvinhu mukurumbira zvokuvakisa, hazvina noitika pasina hapana kuvakwa.
Zvisinei, kukura kwebasa kushandiswa kwayo delimited yakakwirira makuriro nemwaranzi uye pazera yakakwirira mutengo. Kana nemwaranzi - ichi girenayiti pfuma, mutengo vanonzi kunzwisisa kupwanya padombo iri hwakasimba. Kusika girenayiti inoshandiswa unomedurirwa kupinda zvimedu hukuru siyana vari 0, 5 mm - granite chip kushandiswa pamusoro pamakwara uye nhandare; 5 - 20 mm - kupfuura kufarirwa kukura zviyo. Standard vaiona chakapatsanurwa 20 - 40 neMM, rinoshandiswa kuti mukugadzira kongiri zvigadzirwa; 20 - 70 mm uye 40 - 70 mm - hombe chikamu rinoshandiswa kuti kongiri uye kuvaka zvivako zvikuru naye; 70 - 300 mm - Akurirwa ibwe inoshandiswa vasapedze dzimba midziyo kana dzimba dzokugezera. Mavhu mavhu kwakakurumbira chaizvo pakuvaka indasitiri sezvo kongiri uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. uye kongiri zvigadzirwa.
It chakaumbwa sieving jecha yamabwe uye zvakawanda sezvinoita mamwe - padombo Kupwanywa. Kushandiswa ichi chivako zvinhu kunogona kuderedza mari kongiri, apo kuramba zvachiri zvose. Zviri zvishoma radioactive pane girenayiti. Uyezve, ichi chivako mashoko kushandiswa migwagwa uye urongwa sezvo mutoro nokuda njanji. Kuwedzera pachena kuparadzira kushandiswa kwayo mune nzvimbo design - tichigadzira, . Areas etc. P. Sezvineiwo, nokuti zvinangwa izvi zvinogona kushandiswa zvose oga uye musanganiswa mavhu uye jecha. Nepo bemhapemha ichi haatarisiri zvinokosha mari. Yematombo mavhu kana madota kana reraimu mukusiyana nedzimwe mhando zvose zviri kunyanya mari uye akakurumbira.
Zvinonzi akakamurwa zvatinosiita zvikamu zviduku 5 - 20 mm 20 - 40 neMM, 4 - 70 mm. Inoitwa calcite, kuti aumbe nayo nokuda kuwedzera madota. The kupfuura mukurumbira anonzi kuva chikamu 20 - 40 mm. Kubva ndezvevakazvigadzirirwa munhu substrate paakapa pamusoro Asphalt uye kongiri zvinogadzirwa gadzira.
Pane kudaro chinzvimbo sezvinoita mavhu. Pashure Kupwanya "kuvaka tsvina", zvakananga akwegura Asphalt, zvidhina kana kongiri, tive mhiri chivakwa zvinhu.
How kuverenga zvakadini mune imwe kuutio mativi metres rokuvaka zvinhu
Kupedzisa juva nemaoko ako pachako: zvikamu uye zvikamu
Musara mugwagwa: miganhu, chinangwa
How kusarudza Ruvara grout kuti Tile? Grout nokuti zvedongo usina kukonekita
Marble rakanyorwa: rondedzero zvazvakanakira, ine Kugadzira
Dry mhute: wongororo rwokugadzira. Business nokuti yakaoma bvungapfunga
"Skins" movie. Effie Ston
Nemitemo Chirungu kuverenga kuti beginners mienzaniso
Sei upenye Xbox 360
Nosgoth: System zvinodiwa
Ndinoshamisika kuti mwana anodya sei asati aberekwa?
Kufara kuri ... Chii chinofadza uye chinogona sei
Final Kukodzera basa - chii?
"Hiporamin": mirayiridzo kushandiswa, description, akafanana uye wongororo
Caves Beach Resort 5 * (Egypt / Hurghada): photo, wongororo
Monotherapy - chii? Zvakanakira nekuipira monotherapy
Check dhisiki mhosho; nzira uye vanorumbidza